Dzidzo yepamusoro uye iyo Foursquare Shanduko | Martech Zone
Dzidzo yepamusoro uye iyo Foursquare Shanduko
Muvhuro, October 11, 2010 Mugovera, Gunyana 26, 2015 Adam Mudiki
Vhivhesiti vari kurova garo mune vezvenhau! Ivo vari paTwitter, Facebook uye vari kutanga kushandisa geolocation kunyorera seMakona mana. Nei izvi zvichizoshanda? Vazhinji vanotarisira vadzidzi vanoita sarudzo pane kwavanenge vachipinda chikoro parwendo rwekambasi. Saka kugadzira chimiro chakanaka panguva yekushanya kwekutanga kwakakosha. Mativi mana anotendera mayunivhesiti kuongorora iyo kambasi nenzira nyowani. Iko kunyorera kunogona kushandiswa kusiya matipi kuti uve nechokwadi chekuti tarisiro inoziva kwekuenda uye zvekuita panguva yekushanya. Zvimwe zvikonzero zvemayunivhesiti kushandisa geolocation zvinoshandiswa ndezvi:
Goverana zvishoma zvinozivikanwa chokwadi
Goverana ruzivo nezvezvakakosha, zvivakwa, uye kero
Kero mibvunzo vasati vabvunzwa (chengetedzo, kufamba)
Ipa mibairo uye mabheji kukurudzira vadzidzi vatsva kuti vaongorore kambasi
Goverana tsika dzechikoro
Ita kuti vadzidzi vanyurwe munharaunda kunze kwekambasi
Gamuchira mazano kubva kune alumni
Kumwe kushandiswa kweFreequare muyunivhesiti yekumisikidza ndeyeve alumni "kushanyirazve kambasi". Mativi mana anogona kuvabatsira kuti vazive zviri kuitika kubva pavakapedza kudzidza. Semuenzaniso, alum inotarisa mukati ndokuona chivakwa chitsva. Nzvimbo dzakasiyana dzinogona kuve dzakakosha kune vamwe vanhu kushanyirazve University…. nguva ichataura pane iyoyo. Kuwedzera pane icho chinhu chikumbiro chinozovaudza chinangwa chitsva chekuvaka uye nhoroondo "nyowani". Iyo inobatsira alum kuti irambe yakabatana uye isinganzwe kurasikirwa.
Harvard chimwe chikoro chiri kushandisa Foursquare. Ivo vanopa ruzivo rwezvakaitika uye zvinhu zvinonakidza zvekuita pane kambasi, izvo zvese zvinogona kuwanikwa paFreequare pasi pe Harvard peji. Harvard University ine mapeji akati wandei pa Foursquare yezvivakwa zvayo zvakawanda.
Masayunivhesiti anozivikanwa kuva nezviitiko zvakawanda. Imwe nzira yekushandisa yekubatsira kugovana zviitiko zvese izvi ndeye WhrrlIchi chishandiso chinobvumira vashandisi kutarisa-mukati pamwe nekukanda mapikicha uye mameseji ekugovana nezve chiitiko. Ichi chishandiso chine mukana wekuunza pamwechete vadzidzi vatsva uye alumni. Ivo vakasunganidzwa nezviitiko zvavo zvakagovaniswa uye vanogona kuona munguva chaiyo zviri kuitika pazviitiko pamusasa. Maererano ne Mashable, muna Chivabvu 2010, St. Edwards University yakashandisa Whrrl kurangarira mhemberero yayo yekupedza kudzidza.
Iyo imwe yekukurudzira kumayunivhesiti kuti atange kushandisa geolocal kunyorera ihwo huwandu hwe data inogona kuunganidzwa. Iyo data inogona kuratidza kuti zviitiko zvipi zviri kunyanya kupinda, huwandu hwevanhu, koreji tsika uye inogona kuita sarudzo dzakanangana zvichibva pane izvo vadzidzi vanopindura. Masangano epamusoro edzidzo anotambira zvikumbiro zvegeoloaction ichave iri pamberi pemutambo uye ichakwanisa kubatana nevadzidzi vayo munzira dzakakosha.
Tags: zviitiko zvekorejizviitikomativi mana akaenzanaGeolocationvunivhesitizviitiko zveyunivhesiti
Ndira 6, 2011 na10: 05 PM
Kyle, ndatenda neichi chikuru posvo. Ndini nyanzvi yekutaurirana kukoreji diki reruzivo kukoreji muMoorhead, Minnesota (http://foursquare.com/concordia_mn). Hatina vadzidzi vazhinji vanoishandisa asi tiri kutsvaga nzira dzekuwedzera yedu mushandisi-base uye netarisiro yekukwiridzira kutora kwedu.
Ndiri kufunga kuti iwe unofunga zvakanyanya kukosha kuve nehunyanzvi kana matipi pamusasa? Isu tanga tichishanda mukuwedzera matipi asi tiri kunetsekana munzira dzekubatanidza chikamu chekurudzira chekwere ina. Une mazano here?
Apr 30, 2012 pa 11: 04 AM
Ndatenda Kyle nekutsvaga mikana yekushandisa pasocial media nemaUniversity. Dzidzo yepamusoro iri muchikwata cheChimurenga. Icho chiri pamusoro uye pamusoro peIkombiki Ruzivo asi zvichibva paRuzivo, Knowmatics, Ruzivo Kugadzirisa Tekinoroji uye Ruzivo maindasitiri
'Knowmatics - Shanduko Nyowani muPamusoro Dzidzo' Zvinyorwa zveWorld University foramu 4,1,2011: 1-11 inokurukura zvimwe zvezvinhu izvi zvakadzama kunze kweMafungiro aMathew eRuzivo rwekushandisa-Kugadzira, Knowmatics uye Maindasitiri eRuzivo. Nyaya dzakabatana dzinoitwa mukati http://www.slideshare.net/drrajumathew